ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ် စကားပြောအသုံးနှုန်းကို Business English ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ -
ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ် စကားပြောအသုံးနှုန်းကို Business English ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ
Posted on November 23, 2018 November 23, 2018 Author Myat Moe	Comment(0)
အင်္ဂလိပ်စာတော့ တီးမိခေါက်မိရှိပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်သိထားတဲ့ နေ့စဉ်သုံးအပြောအဆို အသုံးအနှုန်းတွေက ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ သုံးလို့အဆင်ပြေရဲ့လား?
Business English လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားက ဒီဘက်ခေတ်မှာ တော်တော်လေး အရေးပါလာသလို အသုံးလည်းများလာတဲ့အတွက် လေ့လာထားဖို့ လိုနေပါပြီ ယောင်းတို့ရေ။ Business English လို့ပြောလို့ရင် အရမ်းကျယ်ပြန့်သွားတာကြောင့် ဒီနေ့တော့ ယောင်းတို့ကို အသုံးများပြီး ယေဘုယျအကျဆုံး လုပ်ငန်းခွင်သုံးဝေါဟာရလေးတွေပဲ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
General English ကနေ Business English ပြောင်းသုံးရတာက အရမ်းခက်ခဲတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ သူတို့နှစ်ခုကြား ကွာခြားမှုက အကြီးကြီးပါ။ တစ်ခါတလေ General English အသုံးအချို့ကို Business ပိုင်းမှာ ထည့်သုံးတာမျိုးရှိပေမဲ့ တစ်ခါတလေကျတော့ level ပိုမြင့်တဲ့ ဝေါဟာရတွေ အစားထိုးသုံးပေးရပါတယ်။ အသုံးလေးတွေဆက်ကြည့်ပေးနော်။
၁။ Email ပို့တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှ Reply ပြန်စရာမရှိတော့ရင်တောင် လက်ခံရရှိကြောင်း တစ်စောင်လောက်ကတော့ ပြန်ပို့ပေးသင့်တယ်မလား။ အဲ့အခါ “I got your email.” ဆိုတဲ့အသုံးထက် “I received your email.” ဆိုတဲ့အသုံးက ပို Formal ဖြစ်ပြီး business field ထဲပိုဝင်ဆံ့ပါ့တယ်။
Related article >>> အလုပ်ခန့်ဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ တွေ့ရင် “two-minute pitch” ဘယ်လိုပြောရမလဲ။
၂။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ အချို့တာဝန်တွေအတွက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အကူအညီတောင်းတဲ့အခါ “I need your help.” ဆိုတဲ့ အသုံးထက် “I require some assistance.” လို့သုံးတာမျိုးက ပိုပြီးယဉ်ကျေးရာ၊ အလေးထားရာရောက်ပါတယ်။
၃။ အစည်းအဝေးမှာ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောင်းချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း case တစ်ခုခုမှာ စိတ်သဘောထား ကွဲလွဲလို့ အချေအတင်ဖြစ်လာမယ့် အခြေအနေကို ဟန့်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောတဲ့အခါ “Let’s talk about it later.” ဆိုတာထက် “Let’s discuss it later.” ဆိုတဲ့အသုံးက ပို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။
၄။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ဖို့လိုလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် mail ပို့ဖို့လိုလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် “Can I get your phone number/ mail address?” လို့ တိုက်ရိုက်မေးမယ့်အစား “How can I contact you?” ဆိုပြီး အဖွင့်မေးခွန်းနဲ့ စလိုက်ပါ။ ဒါဟာ တစ်ဖက်လူရဲ့ privacy ကို အလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
၅။ Make sure ဆိုတဲ့စကားကို သုံးတဲ့အခါ သတိထားပါ။ အခန့်မသင့်ရင် အဲ့အသုံးက အမိန့်သံဆန်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့အစား ensure ဆိုတဲ့အသုံးလေးပြောင်းသုံးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလည်းပေါ်တယ်။ အရမ်းလည်း Strong မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ – “Please ensure to arrive on time.”
Related article >>> အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များတော့မှာလား?
၆။ Tell me ဆိုတဲ့နေရာမှာ Explain ဆိုတဲ့ Verb အစားထိုးသုံးတာကလည်း Impression တက်စေပါတယ်။
၇။ အစည်းအဝေးမှာ ကိုယ်အသေးစိတ်သိချင်တာမျိုးဆိုရင် “Please talk more about this matter.” ဆိုတာထက် “Please elaborate on that.” ဆိုတာမျိုးက request လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပိုဆန်ပါတယ်။
Business English မှာ အဓိကက Verb ပါပဲ။ Verb ကို Level နည်းနည်းမြင့်တာလေးတွေ သုံးပေးလိုက်ရင်ကို Professional ဆန်တဲ့ခံစားမှုမျိုး ရစေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်သိထားပြီးသား စကားလုံးတွေပဲလေ၊ နော်။ Verb ပြောင်းပြီးမှ ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကို ကြိုးစားပြောင်းကြည့်ပါ။ Formal ပိုကျမယ်ထင်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို လေ့လာထားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ English ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ယောင်းတို့ရေ။
အင်ျဂလိပျစာတော့ တီးမိခေါကျမိရှိပါရဲ့ ဒါပမေဲ့ ကိုယျသိထားတဲ့ နစေ့ဉျသုံးအပွောအဆို အသုံးအနှုနျးတှကေ ကိုယျ့လုပျငနျးခှငျမှာ သုံးလို့အဆငျပွရေဲ့လား?
Business English လို့ချေါတဲ့ လုပျငနျးခှငျသုံး အင်ျဂလိပျစကားက ဒီဘကျခတျေမှာ တျောတျောလေး အရေးပါလာသလို အသုံးလညျးမြားလာတဲ့အတှကျ လလေ့ာထားဖို့ လိုနပေါပွီ ယောငျးတို့ရေ။ Business English လို့ပွောလို့ရငျ အရမျးကယျြပွနျ့သှားတာကွောငျ့ ဒီနတေ့ော့ ယောငျးတို့ကို အသုံးမြားပွီး ယဘေုယအြကဆြုံး လုပျငနျးခှငျသုံးဝေါဟာရလေးတှပေဲ မိတျဆကျပေးမယျနျော။
General English ကနေ Business English ပွောငျးသုံးရတာက အရမျးခကျခဲတာမြိုးမဟုတျပမေဲ့ သူတို့နှဈခုကွား ကှာခွားမှုက အကွီးကွီးပါ။ တဈခါတလေ General English အသုံးအခြို့ကို Business ပိုငျးမှာ ထညျ့သုံးတာမြိုးရှိပမေဲ့ တဈခါတလကေတြော့ level ပိုမွငျ့တဲ့ ဝေါဟာရတှေ အစားထိုးသုံးပေးရပါတယျ။ အသုံးလေးတှဆေကျကွညျ့ပေးနျော။
၁။ Email ပို့တဲ့အခါ ကိုယျ့ဘကျကဘာမှ Reply ပွနျစရာမရှိတော့ရငျတောငျ လကျခံရရှိကွောငျး တဈစောငျလောကျကတော့ ပွနျပို့ပေးသငျ့တယျမလား။ အဲ့အခါ “I got your email.” ဆိုတဲ့အသုံးထကျ “I received your email.” ဆိုတဲ့အသုံးက ပို Formal ဖွဈပွီး business field ထဲပိုဝငျဆံ့ပါ့တယျ။
Related article >>> အလုပျခနျ့ဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ အလုပျရှငျနဲ့ တှရေ့ငျ “two-minute pitch” ဘယျလိုပွောရမလဲ။
၂။ ကိုယျတဈယောကျတညျးလုပျဖို့အဆငျမပွတေဲ့ အခြို့တာဝနျတှအေတှကျ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို အကူအညီတောငျးတဲ့အခါ “I need your help.” ဆိုတဲ့ အသုံးထကျ “I require some assistance.” လို့သုံးတာမြိုးက ပိုပွီးယဉျကြေးရာ၊ အလေးထားရာရောကျပါတယျ။
၃။ အစညျးအဝေးမှာ နောကျထပျအကွောငျးအရာတဈခုကို ပွောငျးခငျြလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျအခငျြးခငျြး case တဈခုခုမှာ စိတျသဘောထား ကှဲလှဲလို့ အခအြေတငျဖွဈလာမယျ့ အခွအေနကေို ဟနျ့ခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ပွောတဲ့အခါ “Let’s talk about it later.” ဆိုတာထကျ “Let’s discuss it later.” ဆိုတဲ့အသုံးက ပို ပရျောဖကျရှငျနယျဆနျပွီး စိတျခံစားခကျြကို ထိနျးနိုငျတယျဆိုတာကို ပွပါတယျ။
၄။ တဈယောကျယောကျကို ဖုနျးဆကျဖို့လိုလာတာပဲဖွဈဖွဈ mail ပို့ဖို့လိုလာတာပဲဖွဈဖွဈ “Can I get your phone number/ mail address?” လို့ တိုကျရိုကျမေးမယျ့အစား “How can I contact you?” ဆိုပွီး အဖှငျ့မေးခှနျးနဲ့ စလိုကျပါ။ ဒါဟာ တဈဖကျလူရဲ့ privacy ကို အလေးထားတယျဆိုတဲ့ သဘောပါ။
၅။ Make sure ဆိုတဲ့စကားကို သုံးတဲ့အခါ သတိထားပါ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ အဲ့အသုံးက အမိနျ့သံဆနျသှားနိုငျပါတယျ။ အဲ့အစား ensure ဆိုတဲ့အသုံးလေးပွောငျးသုံးလိုကျပါ။ ကိုယျဖွဈစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒလညျးပျေါတယျ။ အရမျးလညျး Strong မဖွဈတော့ပါဘူး။ ဥပမာ – “Please ensure to arrive on time.”
Related article >>> အင်ျဂလိပျစကားပွောတတျမှ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျး မြားတော့မှာလား?
၆။ Tell me ဆိုတဲ့နရောမှာ Explain ဆိုတဲ့ Verb အစားထိုးသုံးတာကလညျး Impression တကျစပေါတယျ။
၇။ အစညျးအဝေးမှာ ကိုယျအသေးစိတျသိခငျြတာမြိုးဆိုရငျ “Please talk more about this matter.” ဆိုတာထကျ “Please elaborate on that.” ဆိုတာမြိုးက request လုပျတယျဆိုတဲ့ သဘောပိုဆနျပါတယျ။
Business English မှာ အဓိကက Verb ပါပဲ။ Verb ကို Level နညျးနညျးမွငျ့တာလေးတှေ သုံးပေးလိုကျရငျကို Professional ဆနျတဲ့ခံစားမှုမြိုး ရစပေါတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျသိထားပွီးသား စကားလုံးတှပေဲလေ၊ နျော။ Verb ပွောငျးပွီးမှ ကနျြတဲ့ဟာလေးတှကေို ကွိုးစားပွောငျးကွညျ့ပါ။ Formal ပိုကမြယျထငျတဲ့ စကားလုံးလေးတှကေို လလေ့ာထားပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ လုပျငနျးခှငျမှာ English ကို ယုံကွညျမှုရှိရှိ သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ ယောငျးတို့ရေ။
Tagged Business English, casual, English, Knowledge, Speaking, Sunday English
လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင် ဆိုသလိုပင် ဝတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ပိန်ချင်ကြတယ်။ ဟော ပိန်တဲ့သူကျတော့လည်း ဝချင်ပြန်သတဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ရမတုန်း အရပ်ကတို့… နောက်ပြီး ရှိပါသေးတယ်။ အသားလေးညိုတယ် အသားဖြူချင်ပါတယ်တဲ့ ။ အသားဖြူတဲ့သူကျပြန်တော့လည်း အသားလေးညိုမှ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ထင်ပြန်သတဲ့။ ကဲ ဒီပြဿနာမှာ ဘယ်သူတရားခံလဲဝေ့ဟူ၍ပင် မေးရမယောင်… တကယ့် တရားခံကတော့ အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ရာမှာ မတွန့်ဆုတ်ကြတဲ့ ဘေးပယောဂတွေပင်တည်း။ ထိုသူများက မကြာခဏ “ဟယ် နင်ဆိုသည်မှာ ဝလာလိုက်တာ၊ ပိန်လိုက်တာဟယ်၊ အသားကညိုလိုက်တာ၊ အသားက အရမ်းဖွေးတော့ ဆွဲဆောင်မှု မရှိဘူးပေါ့ဟယ်”။ အစရှိသဖြင့် ပြစ်တင်ဝေဖန်လေ့ရှိပြီး မိန်းမပျိုတို့မှာ ထိုစကားများကြားပြီး စိတ်ပျက်အားငယ်ကာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမဲ့လာရသည်မဟုတ်ပါလော။ ထို့အတွက် အဖြေရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကမူ တခြားလူတို့၏ စကားသံများကို နားမယောင်ဘဲ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် ရှေ့သို့ […]
Posted on March 16, 2018 March 16, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဂီတဝါသနာရှင်ယောင်းတို့ အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲလေးတစ်ခု
Posted on July 14, 2017 July 14, 2017 Author
ဒီပွဲက ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ဂီတပညာသင်ဆုပါ ပေးမှာတဲ့လေ။ လာမယ့် ၁၆ရက်နေ့မှာလုပ်မယ့်ပွဲလေးမို့ အခွင့်အရေး လက်မလွတ်စေပါနဲ့နော်။